Naya Post Nepal | भुवन केसी काठमाडौको मेयरमा उठ्ने , कर या रहर?( हेर्नुहोस भिडियो)
भुवन केसी काठमाडौको मेयरमा उठ्ने , कर या रहर?( हेर्नुहोस भिडियो)
आगामी वैशाख ३० गरे एकै चरणमा स्थानीय तहको नि’र्वाचन हुँदैछ। सबै रा’जनैतिक दलहरू स्थानीय निर्वाचनको लागि जोड तोडले लागिरहेका छन्। स’त्तारूढ गठबंधनले ताल मेल गरेर नि ‘र्वाचनमा भाग लिने औ’पचारिक घो”षणा गरेको छ।
यो सँगै काठमाडौं को निर्वाचनको चासो झन् बढ्दै गइ रहेको छ। गाउँ देखि सहर सम्म निर्वाचनको चहल पहल बढिरहेको बेला काठमाण्डौ मा मेयर बन्ने आ’कांक्षी पनि बढ्दै गइ रहदा स’दाबहार नायक भुवन केसी पनि मेयरमा उठ्ने भएका छन्।
उनी उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीबाट मेयरमा उठ्ने भएका छन् । यस अगी र्यापर बालेन् साह पनि उठी सकेका छन।
यो पनि ,,यो पनि ,,राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपाल का ३ ठूला दल नामले अलग पार्टी भएपनि वि’चार र व्यवहारले अ’लग नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रुपन्देही द्वा’रा भैरहवामा आयोजित विशाल आमसभा तथा पार्टी प्रवेश
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले बैदेशिक हस्तक्षेप भित्राउनमा ३ दल लागेको बताउदै हिंसामा विश्वास नगर्ने राप्रपा ले यिनीहरुको बाकस खाली गरेर जनता बाटो भएको देखाउनु पर्ने ठिक समय आएको बताए ।
पर्खने र हेर्ने समय नभएको भन्दै उनले जनता सार्वभौम रहेका ले विवकेले काम गर्न सक्छ भनेर प्रमाणित गर्नु पर्ने बताए । उन ले एमाले, माओवादी, कांग्रेसलाई भोट दिएर देश बन्छ भन्ने आ शा गर्नु भनेको साढेको अगाडि दुधको बाल्टी लिनु जस्तै भएको उनले बताए ।
समान्य आखाले देखे जस्तो देशको अवस्था नरहेको उनले बता ए । ‘गो’ली चलेको छैन, ब’न्द हडताल भएको छैन तर देशमा ३ वटै अंगले काम नगरेको अवस्था छ । सिटामोल पनि उप’लब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा रहेका नेपालमा अदालतको आदेशमा सिटामोल दिनु पर्ने अवस्था छ’ उनले भने ।
२०७८ चैत्र २४, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 599 Views